बबई नदिको पुलबाट खसेका रमेशका साथीहरु आए मिडियाको सम्पर्कमा, यसरी भएको थियो घ’टना ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
December 26, 2020 AdminLeaveaComment on बबई नदिको पुलबाट खसेका रमेशका साथीहरु आए मिडियाको सम्पर्कमा, यसरी भएको थियो घ’टना ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
टिकटकले गर्दा सामाजिक संजालमा विभिन्न हर्कतहरु देखिदै आएकै हो । विशेष गरि युवायुवतीहरु टिकटकमा भा’इरल हुनका लागि विभिन्न अनौठो क्रियाकलाप गर्दै आएका छन । यस्तै टिकटक बनाउने क्रममा एक युवा गम्भीर घा’इते भएका छन । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१९ बिजौरीका २४ वर्षीय रमेश थापा बबई गाउँपालिका-५ पुरन्धारा झरना नजिकैको बबई नदीको झुलुङ्गे पुल मुनि झुण्डीएर टिकटक बनाउने क्रममा लडेर ग’म्भीर घा’इते भएका हुन् ।
घ’टना शनिबार दिउँसो सवा २ बजे तिरको हो । साथीहरुसंग पर्यटकीयस्थल पुरन्धारा झरनामा पिकनिक खान गएका उनीहरु बबई नदी माथिको झुलुङ्गे पुलमा टिकटक बनाउन गएका थिए । तर रमेश थापाले उत्श्री’न्खलता प्रदर्शन गर्दै पुल मुनिको सपोर्ट तारमा झुण्डिने दु’स्साहस गरे । उनि तारमा झुण्डीसके पछि फर्कनलाई धेरै कोशिस गरेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
तर उनको हात गल्दै गए पछी हात छोड्छन र २० मिटर तल बगरमा बजारिन पुग्छन । उनि झुण्डिएको माथि ५-७ जना साथीहरु पनि देखिन्छ तर उनीहरुले खासै सहयोग गर्न सकेनन । गम्भीर घा’इते थापालाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको प्रारम्भीक उपचारपछि थप उपचारका लागि बाँकेको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा रेफर गरिएको थियो ।
तर उनको उपचारको क्रममा कोहलपुर मेडिकल कलेज मै मृ’त्यु भएको थियो । अहिले रमेशको दा’हसं’स्कार पनि गरिसकिएको छ । यसै बीच रमेशका साथिहरु पनि मिडियामा आएर उक्त दिनको घ’टना बारे बोलेका छन् । साथीहरुसंग गरिएको कुराकानी हेर्न यहाँ जानुहोस:
सडकमा मागेर खाने युवती बनिन् संसारकै एक उत्कृष्ट एक मोडल, अहिले गर्छिन् उत्कृष्ट ब्रान्डसँग काम ! हेर्नुहोस् (तस्विर सहित)
काठमाण्डौंको बल्खुमा श्रीमानले घनले श्रीमतीको लिए ज्या’ न, हाँसी हाँसी आएकी सन्तोषी बोरामा बन्द भइन् ! पुरा हेर्नुहोस् (भिडियो सहित )